“Iza No Nampamono An’i Marielle Franco?” Hoy i Brezila Manontany Herintaona Aty Aorian’ny Namonoana Ilay Vehivavy Mpanolotsaina · Global Voices teny Malagasy
Ny fanohizana fitakiana no hamaha ny heloka bevava ao Brezila
Voadika ny 03 Avrily 2019 3:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Deutsch, Italiano, русский, Ελληνικά, English
Monica Benicio, vady andefomandrin'i Marielle, mpikatroka sady mpahay taotrano, nanao tombokavatsa ny sarintavam-badiny teo amin'ny tanany. Sary: Fernando Frazão, Agência Brasil. Naverina nampiasaina nahazoana alalana miaraka amin'ny fanononana.
Nanjary nalaza be manerana an'i Brezila sy tany anatin'ireo fihetsiketsehana ny endrika sy ny anaran'i Marielle Franco taorian'ny namonoana azy tamin'ny 14 martsa 2018 lasa teo. Mpanao politika ao Rio de Janeiro, mpanolotsaina fahadimy be mpifidy indrindra tamin'ireo fifidianana tamin'ny 2016, nisy namono tamin'iny alina iny raha iny hamonjy ny fodiany iny, niaraka tamin'i Anderson Gomes mpamiliny.
Roa andro nialohan'ny fankalazana ny tsingerintaona nahafatesany, nambaran'ny mpitandro filaminana ny nahasamborana olona roa voarohirohy tamin'izany. Ny polisy miaramila teo aloha, Elcio Queiroz, 46 taona, izay voaroka tamin'ny vondrona niasany noho ny asany tsy ara-dalàna tany amin'ireo trano filalaovana, no nahiahiana ho iray nitondra ny fiara izay nanao ny velam-pandriky ny fanafihana an'i Franco. Sergent Ronnie Lessa ilay voarohirohy ho nitam-piadiana, 48 taona, serzà iray izay tsy mbola voaheloka, saingy malaza ho mpitifitra mpitily mahay.
Araka ny voalazan'ny gazety O Globo, taorian'ireo fitsmbadimbadihan'ny toedraharaha sy ny fanasarahana ny fanadihadiana ho roa miavaka tsara (ny iray niantefa tamin'ireo mpamono, ny iray hafa tamin'izay atidoha nikotrika), nosamborin'ny polisy sivily tao Rio ireo voarohirohy taorian'ny fanarahana làlana sarotra nanarahana ny lisitra iray nisy an'ireo antso rehetra tamin'ny finday, nifandray tamin'ny faritra nisehoan'ilay heloka bevava.
Saingy na taorian'ny fahitàna an'ireo izay nogiazana tamin'ny rojovy aza, marobe ireo Breziliana izay nidina andalam-be tamin'ny 14 martsa tamin'ity taona ity, no no nahatsapa hoe misy zavatra banga tamin'ny fitsaràna na ny famaranana azy. Mola mitoetra foana ny fanontaniana fototra. Toy ny voalazan'ilay Breziliana mpanao gazety, Eliane Brum, izay mibitsika isanandro nandritra ny herintaona hoe “iza no namono an'i Marielle”:
Tianay ho fantatra: IZA NO NAMPAMONO AN'I MARIELLE? ARY NAHOANA?
Afaka nanjohy ny tantaran'y fifandraisana nifanoavan'ny findainy ny mpitandro filaminana. Araka ny voalazan'ireo mpanao fanadihadiana, mibahana be ao an-tsainy ireo “olona avy ao amin'ny elatra ankavia”. Ny fandaharanasan'i Marielle sy Marcelo Freixo, lehibeny taloha sady mpikambana tamin'ny Kongresy, dia anisan'ireo fikarohany tamin'ny tambajotra. Fankahalàna ara-politika no mety ho antony, hoy ny nambaran'ny iray tamin'ireo mpanao fanadihadiana.
Saingy marobe no niahiahy tamin'io antony io. Lessa, manamboninahitra ambony iray teo aloha tao amin'ny tafika ary lasa mpitandro filaminana, dia mpikarama an'ady iray fanta-daza teo anivon'ny faribolan'ireo mpitandro filaminana. Voalaza fa niasa ho toy ny mpiambina mitam-basy ho an'ny iray tamin'ny lehiben'ireo toeram-pilalaovana tsy ara-dalàna tao Rio izy nandritra ny taona vitsivitsy, hatramin'ny nahafatesan'ny zanaka lahin'io lehilahy io taminà fanafihana tamin'ny baomba. Niharatsy noho izany ny fitokisana an'i Lessa, tsy nahavita niaro ny fianakavian'ny lehibeny.
Ambony lavitra noho izay tokony ho takatry ny vola fisotroan-dronono raisin'ny manmboninahitry ny polisy ireo fananan‘i Lessa. Ananany ny fiara mifono vy tombanana ho 31 000 dolara Amerikana, sambo iray nampanamboarina araka ny faniriany ary miaina anatina trano miorina anaty faritra mihaja ao Rio izay tombanana ho 2 000 dolara Amerikana ny hofany miampy fandaniana hafa mitentina 500 dolara Amerikana. Araka ny voalazan'i Folha de São Paulo, miorina manatrika ny tranon'ny filoham-pirenena Jair Bolsonaro ny tranon'i Lessa. Nohamafisin'ny mpitandro filaminana ihany koa fa sakaizan'ny zanaka vavin'i Lessa ny iray amin'ireo zanaka lahin'i Bolsonaro.
Hoy ny bitsika hoe: mivovo ny alika, saingy mitohy ihany ny fihetsiketsehana.
Hoy ny sorabaventy hoe: Iza no nanome baiko ilay mpifanila vodirindrina amin'ny filoha hamono an'i Marielle?
Nilaza tamin'ireo mpanao gazety i Bolsonaro fa tsy mba nanana fahatsiarovana momba ilay mpifanila vodirindrina taminy mihitsy. Nihanihany ny filoha tamin'ny filazàna fa ny zanany faralahy, Renan, nanamafy fa nifaneraserany daholo ny mpifanila vodirindrina rehetra, araka izany, tsy nahatsiaro an'”io ankizivavy io” mihitsy izy. Nahiliky ny mpitandro filaminana fotsiny ho toy ny fifanandrifian-javatra io.
Ny andro nisamborana an'i Lessa, 117 no basy hitan'ny mpitandro filaminana izay niangaviany namana iray mba hatoby any aminy. Tsikaritr'izy ireo ihany koa fa naharay lelavola 26 000 dolara izy, fito volana taorian'ny namonoana an'i Franco.
Tamin'ny volana Janoary, ny mpitandro filaminana tao Rio dia nisambotra olona vitsivitsy mifandray amina vondron-tafika iray (fantatra amin'ny hoe “milisy” tao Rio) antsoina hoe “Biraon'ny Heloka bevava” ary nanambara fa mety hisy ifandraisany amin'ny nahafatesan'i Franco izy ireo. Ny reny sy anabavin'ny iray tamin'ireo mpikambana ireo dia efa mpiasa taloha tao amin'ny Flavio Bolsonaro, zanaka lahimatoan'ny filoha, voafidy ho loholona tamin'ny taona 2018.
Tamin'ny taona 2018, ny Intercept Brazil no gazety voalohany nanisy lanjany ny fifandrohizana nisy teo amin'ny tranga Franco sy ny milisy an'ny “Biraon'ny heloka bevava”. Ny lahatsoratra navoakan'ny UOL tamin'ny herinandro lasa teo no namboraka fa nanana mpikambana niasa tao amin'ny sampan'ny mpitandro filaminana mpanadihady mikasika ny vono olona tao Rio ireo mpanao heloka bevava ireo. Nibitsika ny tantara i Leandro Demori, tonian-dahatsoratra ao amin'ny The Intercept Brazil ary nanambara fa:
Taorian'ny korontana mikasika ny Biraon'ny Heloka Bevava, hatramin'ireo fisamborana tamin'ity herinandro ity, tsy hita tao amin'ireo vaovao io anarana io. Hafahafa, sa tsy izany ? Ny marina, tsy izay ilay izy. ” Adihadian'ny polisy federaly ny mikasika fiahiahiana fisian'ny mpikambana avy amin'ny milisy iray fantatra amin'ny anarana hoe Biraon'ny Heloka Bevava, tafiditra ao anatin'ny sampana misahana ireo fanadihadiana mikasika vono olona.”
Fintinin'i Eliane Brum ao anatina tsanganan-dahatsoratra nataony ireo fanontaniana tsy nahazoana valiny mifandray amin'ny famonoana an'i Franco.
Rahoviana marina vao ho fantatray amin'izay izay nanome baiko namonoana an'i Marielle Franco – ary nahoana -, tsy heloka bevava iray fotsiny no ho voavaha. Ny fandrasarasàna ny aty lalin'i Brezila ankehitriny mihitsy no mety hiharihary amin'ny endriny mampihorohoro. Saingy ireo atidoha – sy ireo antony nanosika an-dry zareo – dia tsy ho voaboraka raha tsy mitohy ny fangatahantsika: “Iza no nanome baiko namonoana an'i Marielle? Ary nahoana?”.